Etu ị ga - esi gbochie wayo na asọmpi ị na - esote na ntanetị | Martech Zone
Etu ị ga - esi gbochie aghụghọ na asọmpi ịntanetị gị ọzọ
Anyị ga-ebido nke mbụ nke ọtụtụ asọmpi n'oge na-adịghị anya iji dọta ọtụtụ ndị ọbịa na akwụkwọ akụkọ email anyị. Ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ mmepe mmepe, ọ nweghị ụzọ anyị ga-esi zụlite asọmpi n'onwe anyị. Anyị na-aga ahu nagide Ndewonu, onye na-enye asọmpi n'ịntanetị. N'ihi gịnị? Isi ihe kpatara ya:
Aga m eme ihe n'eziokwu ma kweta na agbagharala m n'asọmpi n'ịntanetị. Ọtụtụ afọ gara aga, anyị nwere asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze iji chọta nwoke na nwanyị kasị ewu ewu na obodo. Mgbe m lere isi iyi nke ibe asọmpi ahụ, achọpụtara m ngwa ngwa na m nwere ike itinye votu naanị site na ịga na URL a kapịrị ọnụ nke agbakwunyere na koodu ahụ. Onye mmepe nke asọmpi ahụ chere na ọ na-aghọ nkọ ma na-egbochi onye ọ bụla na-abịa site n'otu adreesị IP ahụ.
Ya mere, agbakwunyere m iframe na saịtị m nke na-atụ aka na njikọ ntuli aka m. Onye ọ bụla mepere peeji m ụbọchị ahụ n’amaghị ama tozuru oke m. N'ụbọchị niile, m ga-enyocha akara ntuli aka ma wepụ iframe oge ọ bụla m gafere ụzọ na votu ahụ.
Tupu i kpee m ikpe, abịara m ọcha tupu m merie n'asọmpi ahụ. Edere m onye mmepe ahụ ma mee ka ọ mata na m ghọgburu. Agwara m ihe omume ahụ banyere otu ọ si dị mfe ịghọ aghụghọ n'egwuregwu n'ịntanetị. Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na ndị mmepe gị akụrị mpi n'ịntanetị, ị ga-emeghe ọnụ ụzọ ịghọ aghụghọ ule. Achọpụtala m ọtụtụ narị asọmpi n'ịntanetị ma ọ tụrụ m n'anya na ọtụtụ ndị na-eji ụzọ ndị a dị mfe nnabata ndị aghụghọ.
Asọmpi ntanetị na-arụ ọrụ site na wijetị saịtị na ngwa mmekọrịta ọha na eze nwere atụmatụ sara mbara nke na-egbochi wayo. N'ezie, ha na-enyekwara gị aka ịkwalite asọmpi ahụ, jiri ha gafee ndị na-ajụ dijitalụ, ma tụọ nzaghachi.
a ozi sitere na EasyPromos na-agagharị site na omume atọ na-eduga na aghụghọ na asọmpi n'ịntanetị:
Ojiji nke otutu akuko na akụrụngwa akụrụngwa.
Votezụ ahịa ntanetị n'ịntanetị.
Iji akaụntụ ezuru ohi, site na phishing, iji tụọ votu.
Easypromos na-enye ngwa ọrụ zuru oke yana njikwa nchekwa 11 maka nlekota na igbochi wayo na asọmpi ịtụ vootu gị. Ga-enwekwa ike ịbanye na Ndepụta Egwu - Ngwá ọrụ ga-agwa gị ma ọ bụrụ na onye ọrụ emeela aghụghọ, na-enyere gị aka ikpebi izi ezi nke ntinye ya. Na Njikwa wayo Easypromos Sistem ga - enyere gị aka ịchọpụta ma gbochie omume ọjọọ; zere esemokwu dị n'etiti ndị so na ya; ma hazie asọmpi ịtụ vootu doro anya maka obodo gị.
Tags: zọọ aghụghọn'asọmpimfepromosigwu wayondewompi n'ịntanetị
Mgbakwunye Mgbakwunye na Nkwado-SPAM Nnabata
Aug 1, 2016 na 4: 45 AM
Chei, Daalụ maka ịkekọrịta ozi Informative na ndị niile na-agụ ntanetị.
N'ezie okpu ya dị mma.